စကျတငျဘာလ အတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျ အကောငျးဆုံး ဘောလုံးသမားဆု ကို ဘယျသူ ဆှတျခူးမလဲ? - SPORTS MYANMAR
စကျတငျဘာလ အတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျ အကောငျးဆုံး ဘောလုံးသမားဆု ကို ဘယျသူ ဆှတျခူးမလဲ?
စကျတငျဘာလ အတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျ ရဲ့ EA Sports လ အလိုကျ အကောငျးဆုံး ကစားသမားဆု ခြီးမွှငျ့ ပေးအပျဖို့ ဆနျကာတငျ ကစားသမားစာရငျးကို ထုတျပွနျ ကွငွောလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။
ဒီစာရငျးမှာတော့ အာနိုး ၊ အူဘာမီးယနျး ၊ မာရကျ ၊ ဒီဘရိုငျး ၊ ပါရဲရား ၊ ဆှနျ ၊ ကလမျ ဝီလျဆငျ ၊ မကျဂငျးနျ တို့ ပါဝငျလာခဲ့ပါတယျ။
အကောငျးဆုံ ကစားသမားဆု ကိုတော့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ အှနျလိုငျး Voting အပါအဝငျ ၊ ပရီးမီးယားလိဂျ အသငျး 20 က အသငျးခေါငျးဆောငျတှေ ရဲ့ မဲ နဲ့ ဒိုငျလူကွီးမြား အဖှဲ့ရဲ့ မဲတှကေို ပေါငျးစပျပွီး သတျမှတျပေးသှားမှာပါ။
လီဗာပူး နောကျတနျး ကစားသမားဟာ အာနိုးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလ အတှငျး ယှဉျပွိုငျ ကစားခဲ့တဲ့3ပှဲမှာ3ပှဲ စလုံး အနိုငျရအောငျ စှမျးဆောငျပွခဲ့ပွီး ၊ ခြဲဆီး နဲ့ ကစားတဲ့ ပှဲမှာတော့ ဖရီးကဈ ကနေ တဆငျ့ လှပတဲ့ သှငျးဂိုး တဈဂိုး ရယူနိုငျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။
အာဆငျနယျ တိုကျစဈမှုး အူဘာမီးယနျးဟာ စတငျဘာလ အတှငျးမှာ စုစုပေါငျး သှငျးဂိုး5ဂိုး အထိရှိနခေဲ့ပွီး ၊ အဲဒီ အထဲမှာ မွောကျလနျဒနျ ဒါဘီပွိုငျဘကျ စပါး အသငျးဘကျကို သှငျးယူတဲ့ ဂိုးတှေ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
မနျစီးတီး ကှငျးလယျ ဗိုလျခြုပျ ဒီဘရိုငျးကတော့ ဒီရာသီ အစပိုငျးမှာ ကတညျးက သူ့ရဲ့ ပုံစံကောငျးတှေ ပွသနိုငျခဲ့တာ ဖွဈပွီး ၊ ပွီးခဲ့တဲ့ လ အတှငျး ကစားခဲ့တဲ့3ပှဲမှာ ကိုယျတိုငျ 1 ဂိုး သှငျးယူကာ ၊ အသငျးဖျောတှေ အတှကျ ဂိုးသှငျးယူနိုငျအောငျ3ကွိမျ အထိ ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူဟာ လကျရှိ မနျစီးတီး တိုကျစဈရဲ့ ပုံဖျောမှုတှကေို အဓိက တာဝနျယူနသေူ ဖွဈသလို ၊ သူ့ရဲ့ ဖွတျတငျဘောတှေ ကလဲ ကွောကျခမနျးလိလိ ဖွဈလောကျအောငျကို တိကြ သသေပျလှနျးနခေဲ့ပါတယျ။
မနျစီးတီး အတှကျ အရေးကွုံလာရငျ သှငျးဂိုးတှေ ရယူပေးနသေူကတော့ မာရကျ ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ စကျတငျဘာလအတှငျး အသငျးအတှကျ 1 ဂိုး သှငျးယူပွီး ၊ 1 ဂိုး ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ အခုလို ဆနျကာတငျစာရငျးမှာ ပါဝငျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အကျဈတှနျဗီလာ အသငျးရဲ့ ကှငျးလယျ ကစားသမား မကျဂငျးနျ ဟာ သူ့ရဲ့ သှငျးဂိုး တှနေဲ့ အတူ ပရီးမီးယားလိဂျကို စတငျ အခွခေတြဲ့ ရာသီမှာပဲ စှမျးဆောငျထားလြှကျ ရှိပွီး ၊ လကျစတာ နောကျတနျး ကစားသမား ပါရဲရား ကလဲ သှငျးဂိုး နှဈဂိုး အထိ ရယူနိုငျတာကွောငျ့ ဒီစာရငျးမှာ ပါဝငျနခေဲ့တာပါ။
စပါးအတှကျ2ဂိုး သှငျးပွီး2ဂိုး ဖနျတီးပေးခဲ့တဲ့ ဆှနျဟာလဲ ဆနျကာတငျ စာရငျးမှာ ပါနခေဲ့သလို ၊ ဘုနျးမောကျ အတှကျ4ဂိုး အထိသှငျးယူပေးနိုငျခဲ့တဲ့ ကလမျ ဝီလျဆငျလဲ ဒီစာရငျး ပါဝငျနခေဲ့ပါတယျ။
ဒီဆုအတှကျ ဘယျသူက ဆှတျခူး ရယူသှားမလဲဗြာ………
စက်တင်ဘာလ အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆု ကို ဘယ်သူ ဆွတ်ခူးမလဲ?
စက်တင်ဘာလ အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ EA Sports လ အလိုက် အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု ချီးမြှင့် ပေးအပ်ဖို့ ဆန်ကာတင် ကစားသမားစာရင်းကို ထုတ်ပြန် ကြေငြာလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာရင်းမှာတော့ အာနိုး ၊ အူဘာမီးယန်း ၊ မာရက် ၊ ဒီဘရိုင်း ၊ ပါရဲရား ၊ ဆွန် ၊ ကလမ် ဝီလ်ဆင် ၊ မက်ဂင်းန် တို့ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
အကောင်းဆုံ ကစားသမားဆု ကိုတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အွန်လိုင်း Voting အပါအဝင် ၊ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်း 20 က အသင်းခေါင်းဆောင်တွေ ရဲ့ မဲ နဲ့ ဒိုင်လူကြီးများ အဖွဲ့ရဲ့ မဲတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး သတ်မှတ်ပေးသွားမှာပါ။
လီဗာပူး နောက်တန်း ကစားသမားဟာ အာနိုးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ အတွင်း ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့တဲ့3ပွဲမှာ3ပွဲ စလုံး အနိုင်ရအောင် စွမ်းဆောင်ပြခဲ့ပြီး ၊ ချဲဆီး နဲ့ ကစားတဲ့ ပွဲမှာတော့ ဖရီးကစ် ကနေ တဆင့် လှပတဲ့ သွင်းဂိုး တစ်ဂိုး ရယူနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှုး အူဘာမီးယန်းဟာ စတင်ဘာလ အတွင်းမှာ စုစုပေါင်း သွင်းဂိုး5ဂိုး အထိရှိနေခဲ့ပြီး ၊ အဲဒီ အထဲမှာ မြောက်လန်ဒန် ဒါဘီပြိုင်ဘက် စပါး အသင်းဘက်ကို သွင်းယူတဲ့ ဂိုးတွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီး ကွင်းလယ် ဗိုလ်ချုပ် ဒီဘရိုင်းကတော့ ဒီရာသီ အစပိုင်းမှာ ကတည်းက သူ့ရဲ့ ပုံစံကောင်းတွေ ပြသနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ လ အတွင်း ကစားခဲ့တဲ့3ပွဲမှာ ကိုယ်တိုင် 1 ဂိုး သွင်းယူကာ ၊ အသင်းဖော်တွေ အတွက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်အောင်3ကြိမ် အထိ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူဟာ လက်ရှိ မန်စီးတီး တိုက်စစ်ရဲ့ ပုံဖော်မှုတွေကို အဓိက တာဝန်ယူနေသူ ဖြစ်သလို ၊ သူ့ရဲ့ ဖြတ်တင်ဘောတွေ ကလဲ ကြောက်ခမန်းလိလိ ဖြစ်လောက်အောင်ကို တိကျ သေသပ်လွန်းနေခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီး အတွက် အရေးကြုံလာရင် သွင်းဂိုးတွေ ရယူပေးနေသူကတော့ မာရက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ စက်တင်ဘာလအတွင်း အသင်းအတွက် 1 ဂိုး သွင်းယူပြီး ၊ 1 ဂိုး ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အခုလို ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အက်စ်တွန်ဗီလာ အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား မက်ဂင်းန် ဟာ သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုး တွေနဲ့ အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို စတင် အခြေချတဲ့ ရာသီမှာပဲ စွမ်းဆောင်ထားလျှက် ရှိပြီး ၊ လက်စတာ နောက်တန်း ကစားသမား ပါရဲရား ကလဲ သွင်းဂိုး နှစ်ဂိုး အထိ ရယူနိုင်တာကြောင့် ဒီစာရင်းမှာ ပါဝင်နေခဲ့တာပါ။
စပါးအတွက်2ဂိုး သွင်းပြီး2ဂိုး ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ဆွန်ဟာလဲ ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာ ပါနေခဲ့သလို ၊ ဘုန်းမောက် အတွက်4ဂိုး အထိသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကလမ် ဝီလ်ဆင်လဲ ဒီစာရင်း ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆုအတွက် ဘယ်သူက ဆွတ်ခူး ရယူသွားမလဲဗျာ………